Ìjú Mmiri: Gọọmenti Anambra Akpọkuo Ndị Ka Bi n'Akụkụ Mmiri Ka Ha Kwagharịa Ọnọdụ ■ Kpọọ Òkù Ka A Gbatakwuo Ọsọ Enyemaka...
Dịka iju mmiri gara n'ihu wee na-eme mkpamkpa dị egwu n'ọtụtụ ebe dị iche iche na steeti Anambra ugbu a, ọchịchị steeti ahụ agaala n'ihu kpọnwèé oku ahụ ha na-akpọ na ọkwa ahụ ha na-ama iji gwa ndị bi n'akụkụ ikpere mmiri na steeti ahụ kwagharịa ọnọdụ ha ma ga biri n'ebe ahụ e weputaara ha.
Taa bụ Sọndee, abalị 5 nke ọnwa Nọvemba, otu nwata nwoke onye Amerịka, jere gbuo mmadụ 26 n’ụlọ ụka First Baptist Church, na Sutherland Springs, na Steeti Tegzas.
N’ihe dịka elekere iri na otu na ọkara, nwata nwoke ahụ gbara afọ 26, buru egbe agha gawa n’ụlọ ụka ahụ. Ọ bara n’ime ụlọ ụka, ebe ndị mmadụ na-efe Chineke, malite ịkwa mgbọ aghara aghara.
Otu n’ime ndị nwụrụ anwụ bụ nwata nwanyị dị afọ 14, nnwa Frank Pomeroy, onye Ụkọchukwu na-elekwata ụlọ ụka ahụ.
Mmadụ 26 nwụrụ anwụ. Ịhe karịrị mmadụ 20 marụrụ ahụ.
Ndị uwe ojii ekwuona na mgbe nwata nwoke ahụ kpachara arụ ahụ, sizie n’ụlọ ụka ahụ na-apụ, otu nwoke ọzọ bidebere ụlọ ụka ahụ nso malitere gbawa ya egbe.
Nke a mere o jiri gbaba n’ịme ụgbọala o jiri bia ebe ahụ, were bọrọ ọsọ.
Ndị uwe ojii kwuru na ha mechara chọta ya ebe ọ nwụrụ anwụ n’ime ụgbọala ya.
Anyị amatabeghị otu o siri nwụọ.